दसैंमा कलेजोका बिरामीले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी
कोशी अनलाइन शनिबार, १८ असोज, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, १८ असोज । नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैंमा चिल्लो, मसलेदार तथा माछामासु लगायतका खानेकुराको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । एकछिनको रमाइलो र सन्तुष्टिका लागि चाडबाडका बेला खानपिनमा ध्यान नदिएको खण्डमा जीवनभर पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ । यसो भन्दैमा माछामासु खाँदै नखाने भनेको पनि होइन । चिकित्सकहरुका अनुसार मासुका परिकारमा ठिक्क चिल्लो र मसला भएको हुनुपर्छ । जतिमात्रामा मासु खाइएको छ, त्योभन्दा बढी मात्रामा फलफुल तथा सलादलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
दशैंमा चिल्लो, मसलेदार तथा मासु जन्य पदार्थको खानेकुरा खानै परे पनि थोरैमात्र खान सकिन्छ र, खाना पचाउन र स्वास्थ्य रहनका लागि बिहान शारीरिक ब्यायाम तथा योग गर्न सकिन्छ । मदिरापान, धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थले अझ हानि गर्ने हुदा यस्ता कुरा बाट टाढा नै रहेको राम्रो हुन्छ । कलेजोका बिरामीले बिर्सेर मदिराको सेवन गर्नु हुदैन । किनकि मदिरा, बोसोयुक्त र चिल्लो खानाकै कारण कलेजोमा समस्या निम्तने गर्छ । दशैं तथा अन्य चाडपर्वमा यस्तै खानेकुरा बढी खाइने हुनाले सावधानी अपनाउन जरुरि देखिन्छ ।
कलेजोरोग विशेषज्ञ डा. दिलिप शर्माका अनुसार दसैंको समयमा खानामा ध्यान नदिँदा कलेजो विग्रने सम्भावना धेरै हुन्छ । विशेषगरी कलेजो मदिरा, बोसोयुक्त तथा चिल्लो खानाले गर्दा स्वास्थ्य मानिसलाई समेत कलेजोको समस्या निम्तिन सक्ने हुन्छ । कलेजोले मदिरालाई पचाउन नसकेको अवस्थामा वा पचाउनका लागि उर्जा खर्च भएन भने रक्सी बोसोमा परिवर्तन भई कलेजो, रक्तनली र मुटुमा जम्मा हुन जान्छ । कलेजोका बिरामीले खानपान तथा बोसो जम्मा हुन नदिनका लागि नियमित शारीरिक व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
रक्सीलाई पचाउने काम कलेजोको हो । कलेजोमा रक्सी जम्मा हुँदै टुक्रिँदै जल्दै जान्छ, र यसक्रममा शरीरमा प्रशस्त ऊर्जा उत्पन्न हुन जान्छ । त्यो ऊर्जा खर्च नभएको खण्डमा बोसोमा परिवर्तन भई कलेजो, रक्तनली र मुटुमा जम्मा हुनपुग्छ । रक्सीलाई पचाउन कलेजोले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकोले कलेजो छिट्टै थाक्छ, र त्यहाँ बोसो जम्मा हुँदै जान्छ । कलेजोमा बोसो बढ्दै गएपछि त्यसले कलेजोलाई बिस्तारै नष्ट गरेर ‘लिभर सिरोसिस’ निम्त्याएर कलेजोले काम गर्न छोड्छ । मानिसको रगतमा रहेको अल्कोहलको मात्रा बढ्दै गएमा यसले दिमाग र स्नायू प्रणालीलाई नकारात्मक प्रभाव पनि पार्दै जान्छ ।
त्यसकारण, दशैं तथा अन्यसमयमा मदिरा र मासु खाँदा विशेष ध्यान दिन डा. शर्माले सुझाव दिने गरेका छन् ।